WPC weel ubaxa
Koras Electric Baseboard
Midabo Abuulahab Home kululeeyaha
Electric Baseboard PCBA
2018 New Imaanshaha Phone Control APP Adjus Heerkulka ...
Intelligent Electric Baseboard 60 "Size Large ...
Xardho marmar Baseboard Hand duntii Dabiiciga White M ...
Olol Settings garoomada Electric Baseboard Suurogal ah ...
Wood dabaqa caag ah
Shuruudaha Shipping: FOB Shenzhen Payment Terms: TT / LC MOQ: 100 Unit Price: fadlan nala soo xiriir Size: kartoo Product DescriptionThe wax qori-caag ah oo cusub waa nooc ka mid ah wax bilicsanaanta deegaanka, caag iyo cellulose (budada baasaboorka, budada cawska ka dhigay, budo dhagax, budada qori) la nuugo biyaha process.Its gaar ah waa hoos 2/1000 of iska caabin ah daxalka ay ka badan tahay toban jeer oo qoryo ah. sifooyinka Product * biyaha, caddayn qoyaan, ballaarinta lahayn, lahayo ku jirin, arrinkaas lahayn, n ...
Shixnadaha Terms: FOB Shenzhen
Shuruudaha Payment: TT / LC
Unit Price: fadlan nala soo xidhiidh
wax qori-caag cusub waa nooc ka mid ah wax bilicsanaanta deegaanka, caag iyo cellulose (budada baasaboorka, budada cawska, budada dhagax, budada qori) la dhigtay nuugista biyo process.Its gaar ah waa hoos 2/1000 of daxalka ah iska caabin ah waa in ka badan toban jeer oo qoryo ah.
* biyaha, caddayn qoyaan, ballaarinta lahayn, lahayo ku jirin, arrinkaas lahayn, waxa qudhmay lahayn. Waxay noqon kartaa usedin deegaanka qoyan, halkaas oo waxyaabaha qoryo dhaqanka aan Bu isticmaali karaa.
* Cayayaanka xaga ka hortaga, iska caabin aboor, iska caabin ah daxalka, anti-gabowga, nolosha adeeg dheer.
* No wasakhaysan, carbon hooseeyo, jawi saaxiibtinimo, keydinta tamarta iyo yareynta warshadu hawada.
* Fasalka dab-retardant waa B1.It noqon kartaa wax ku ool ah si ay u joojiyaan dab ma saara gaasta anyharmful.
* Plasticity Good, midabo, ma fududa in la libdhi, taabashada alwaax, si buuxda u fikiri kartaa personalizedmodeling iyo shakhsiyadda.
* Waa in la qodbay karaan, qorshe, iyo hoosba, qoday leh dhismaha fudud oo fudud oo installationsteps, waqtiga iyo qarashka lagu badbaadinayo.
* Badbaado Energy, cusboneysiin, oo waafaqsan siyaasadda horumar waara ee dalka iyo shuruudaha.
Next: Wood sanduuqa ubax caag ah
shido waxaa inta badan loo isticmaalo kululaynta iyo decoration
XinYingXin Electronics Technology barayaa qalab horumarsan oo soo saarta noocyada kala duwan ee wax soo saarka teknoolojiyad sare. Iyada oo tayo wanaagsan leh iyo sumcad wanaagsan, alaabta waa mid aad loo jecel in Europe, North & South America, Australia, Bariga Dhexe iyo Bariga Asia. Ka sokow, waxaan ka dhigay xidhiidhka ganacsi wanaagsan dunida shirkadaha caanka ah sida Walmart, Home Depot THE, Turos KANADA, MENARDS ...... goobaha Our saarka billawdaan guud ahaan meel ka mid ah in ka badan 30000sqm iyo wax soo saarka ee sannadlaha ah oo ka mid ah tiro lagu shido korontada in hal milyan oo gogo '. Marka taa laga reebo, aan si guul helay shahaadada tayada caalamiga ah ee ISO9001, Sudee, CE, EMC, CSA, ka imanaysa iyo FSC
Waaxyihiisu lebenkii Building
Lebenkii Wood Waayo Building
Wood duritaanka wax taaj oo kale
Wood Like caaga
Shirkado cusub Wood wax taaj oo kale
Wood caaga darka
Wood caaga darka Furniture
Wood caaga darka duritaanka wax taaj oo kale
Wood caaga darka-saareyaasha
Shirkado cusub Wood caaga darka
Wood dabbaasha waxaad huwataa
Duntu Wooden Shirkado cusub
Wpc Waxyaabaha Price
Wpc qaydhiin Waxyaabaha
Wpc Wood caaga
Wpc Wood caaga darka
Wpc Wood caaga Price darka
guryaha caag ah oo qoryo ku nolaato
LED Jilidda Fire Electric Fireplace09
WPC House Eco Kabiin
Cinwaankaaga: dabaqa 7-dii, bari dhismaha B, weihuada park warshadaha, degmada longhua, Shenzhen